Iimveliso zokukhanyisa ezingxamisekileyo kunye nomthengisi wamandla ongxamisekileyo | Guangdong Zhenhui
Izibane ezingxamisekileyo kunye neNkqubo yokuKhusela iSisombululo seNkqubo yokukhusela i-Guangdong, China.
Udonga olungxamisekileyo okanye izibane ze-celish
I-TWINS SPOS ENTSHA
Uncedo lwamandla olungxamisekileyo
Ukuqhushumba Ubungqina bophazi lwexesha likaxakeka
Izibane zomqondiso ophelileyo
I-TANPHOS kunye negalari ukukhanya
Iingcali kwiNkqubo yokhuseleko loMlilo
Izibane ezingxamisekileyo, izibane ezingxamisekileyo, ukuhanjiswa kwamandla okungxamisekileyo, inkqubo yokufuduka komlilo ephakathi kunye nezinye iimveliso zokukhanya okungxamisekileyo
I-ZFE Brand ZF-W9-123 Ukuhanjiswa kwamandla kaNgxamiseko kunye nexabiso elifanelekileyo kunye nomgangatho ophezulu owenziwe nguGungdong Zhenhui kwi-China
I-ZFA ibhaliswe i-ZF-W9-122 Ukuhanjiswa kwamandla eNgxamisekileyo esetyenziselwa ukukhanya kunye nepaneli yepaneli eyenziwe nguGungdong Zhenhui
Ukukhanya okungxamisekileyo kukhanya kwe-ZF-118 I-WHOSALELE NGEXESHA LOKUGQIBELA - Zhenhui
Zhenhui ihembeledale yeNgxayelo yeNgxibano ye-ZF-118 ngexabiso elifanelekileyo - Zhenhui, sineziko lethu lovavanyo kumzi-mveliso ukuze kuqinisekiswe iimfuno zabathengi abazanelisa iimfuno zabathengi abazanelisa iimfuno zabathengi abazanelisa iimfuno zabathengi.
Abavelisi boKhuseleko lwe-ZF-W8-80000b
Zhenhui of Fricional ZF-W8-800B Ulungelelwaniso Lokutyumba Isalathisi seNkampani, sinemisifundisane kunye ne-ofisi yeemitha ezingama-50000 kwaye sibambe amanani akho aphezulu.
Ukwakha iqonga elikrelekrele umlilo.
Inkampani igxile kwi-R& D, Ukuveliswa, ukuthengisa kunye nenkonzo yokuhambisa ukukhanya komlilo, ukuhanjiswa kwamandla okungxamisekileyo, inkqubo yokukhutshelwa kwemali engqonge imveliso kunye nezinye iimveliso, ngelixa ukwakha iqonga elikrelekrele umlilo.
Njengeshishini eliphezulu lobugcisa kunye neshishini elidumileyo lentengiso kumzi-mveliso wokuKhanya komlilo, inkampani iye yazibophelela kuphando kunye nophuhliso lwetekhnoloji yokusika kumzi-mveliso wokukhanyisela umlilo.
Yenza uphawu oluphezulu lokuphela kwengqondo
Thatha uxanduva lokukhusela ukhuseleko lwabantu kunye nepropathi
Imveliso entsha, isantya, uxanduva
Phumelela ukuthembana kwabathengi ngomgangatho kunye nenkonzo kwaye wenze ixabiso lamaqabane kunye nabasebenzi
Amandla amakhulu aqinileyo, igama eliqinisekileyo kunye nodumo oluthembekileyo
I-Guangdong Zhelong Zhelong Zowa i-Ce., Ltd. yasungulwa ngo-1991 ngemali eli-10 ebhalisiweyo yeYuan.
Ikomkhulu layo ikwi-Zhongshan, kwiPhondo laseGuangdong, kunye nendawo iyonke yeemitha ezingama-50000. Inkampani igxile kwi-R& D, Ukuveliswa, ukuthengisa kunye nenkonzo yokuhambisa ukukhanya komlilo, ukuhanjiswa kwamandla okungxamisekileyo, inkqubo yokukhutshelwa kwemali engqonge imveliso kunye nezinye iimveliso, ngelixa ukwakha iqonga elikrelekrele umlilo.
Njengeshishini eliphezulu lobugcisa kunye neshishini elidumileyo lentengiso kumzi-mveliso wokuKhanya komlilo, inkampani iye yazibophelela kuphando kunye nophuhliso lwetekhnoloji yokusika kumzi-mveliso wokukhanyisela umlilo. Inkampani inophando oluqinileyo lophando kunye neqela lophuhliso. Iimveliso zihambelana ngqo ne-GB17945-2010, GB3836 kunye ne-GB12476, kwaye zifumane isiqinisekiso esinyanzelekileyo se-3C, isiqinisekiso sobungqina boMveliso weZizwe zoMlilo. Ngeli xesha, inkampani iphumeza i-GB51309-2018 IMIYAMANEKO YOKUGQIBELA EKHONDE YENKCAZO YOPHUHLISO KUNYE NOPHUHLISO LOPHUHLISO LWEZIHLOKO, kwaye iba nomthathi-nxaxheba ekuqulunqweni kwe-Atlas yeSizwe.
Thatha umgangatho kunye nokuyila njengenjongo yenkampani, landela ngokungqongqo inkqubo yolawulo lwe-IS09001 ukubonelela ngesiqinisekiso esiqinileyo kwiimveliso ezisemgangathweni.
Inkampani ithatha umsebenzi weshishini 'lokukhusela ukhuseleko lwabantu kunye nepropathi "kunye nexabiso leshishini" lokuphuhlisa, isantya kunye noxanduva ".
Sinikezela ngezisombululo zokuKhangela kweShiy Fire Show kwiiprojekthi ezi-1000 ze-china, kubandakanywa enye iprojekthi enkulu yenkulungwane, enjenge-Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge, iBicialium-Macao-Macao-Macao-Macao-Macao-Macao-Malue Stac Stac Stac
UZhenhui ubonelele ngezisombululo zeshishini zokukhanyisa umlilo ngaphezulu kweeprojekthi ezili-1000 ezahlukeneyo